भगवान्′ भन्ने बित्तिकै हामी त्यसलाई लक्षित गरिरहेका हुन्छौँ, जुन हामीभन्दा विशाल छ
काठमाडौं, ९ मंसिर-आध्यात्मिकता भनेको कुनै विशेष अभ्यास होइन । यो एक प्रकारले हुने तरिका हो । त्यस स्थितिसम्म पुग्नको लागि, गर्नुपर्ने चीजहरू थुप्रै छन् । यो तपाईंको घरको बगैँचा जस्तै हो । यदि माटो, सूर्यको किरण र विरुवाको फेद एक निश्चित स्थितिमा छन् भने, त्यसमा फूल फुल्दैन । तपाईंले यसको लागि केही गर्नुपर्ने हुन्छ । तपाईंले ती चीजहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । त्यसैगरी, यदि तपाईंले आफ्नो शरीर, मन, भावनाहरू तथा उर्जाको प्रयोग गरी निश्चित स्तरसम्म विकसित गर्दै लैजानुभयो भने, तपाईंभित्र केही प्रस्फुरित हुनेछ— यही आध्यात्मिकता हो । जब तपाईंको तर्क अपरिपक्व हुन्छ, यसले हरेक चीजप्रति सन्देह गर्दछ । जब तपाईंको तार्किक बुद्धि परिपक्व हुन्छ, यसले हरेक चीजलाई पूर्णतया फरक परिप्रेक्ष्यमा देख्दछ ।
जब व्यक्तिले आफूभन्दा केही विशाल चीजको अनुभव गर्दछ, तब त्यसलाई ′यो भगवान् हो′ भनेर हेर्ने गरिन्छ । ′भगवान्′ भन्ने बित्तिकै हामी त्यसलाई लक्षित गरिरहेका हुन्छौँ, जुन हामीभन्दा विशाल छ । यो कोही व्यक्ति हुन सक्दछ वा कुनै अनुभव वा प्रकृतिका केही आयामहरू समेत हुन सक्छन् । तर, के यही आधयात्मिकता हो ? होइन, यो केवल जीवन हो । जब म ‘केवल जीवन’ भनिरहको छु, म यसलाई झिनो कुराको रूपमा आँकलन गरिरहेको छैन । यो सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । जब यो जीवन तपाईंलाई भाव विह्वल गर्ने शक्तिशाली र आनन्ददायक अनुभव बन्दछ, तबमात्र तपाईं यो जान्न चाहनुहुन्छ कि यसको रचयिता को हुन्— यसलाई कसले सृजना गरेका होलान् ?
हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङमा सडक कालोपत्रे गरियो
आज देशभर बदली रहने, यी प्रदेशमा वर्षा र हिमपातकाे आँकलन